DOWNLOAD La Rochelle - Dele De Ré LFBH FSX & FSX Steam - Freeware
Pretty tsara toerana tsara tarehy photoreal pirinty 3.0 ny seranam-piaramanidina ao La Rochelle any Frantsa (LFBH) Sy ny manodidina. Ampidiro ny tetezana ny Ile de Ré, miaraka amin'ny halavan'ny 2926.5 metatra. Ny trano dia natao teo ambany GMAX optimisé mba hahatonga ny toerana manodidina araka izay hampandeha tsara araka izay azo atao. Manokana ny FPS natao! Ny mpiasa tany dia animation, ka dia tsy ho gaga ny mahita olona nitsangantsangana teny ambonin'ny Lalantara. Ny seranam-piaramanidina volen'ny tsara.
La Rochelle Airport dia seranam-piaramanidina misokatra ho an'ny daholobe ny fifamoivoizana an'habakabaka (CAP), miorina 2.5 km avaratrandrefan'i La Rochelle, Charente-Maritime. Izany no ampiasaina ho an'ny rivotra fitaterana (firenena sy ny iraisam-pirenena) sy ny fampiharana ny fialam-boly sy ny fizahan-tany (general fiaramanidina)
Mba hanokafana ny mpitantana ny seranam-piaramanidina ao FSX/P3D ary midira ity kaody ity LFBH amin'ny seranam-piaramanidina any an-tsaha ID
Downloads 32 446
Noforonina 15 Sep 2013
Nohavaozina taminy 15 Apr 2019